Gurbaan suurarratti argitan kuni Biraanuu Siidaa Birruu jedhama. Dhalataa fi jiraataa magaala Laga Xaafoo ti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGurbaan suurarratti argitan kuni Biraanuu Siidaa Birruu jedhama. Dhalataa fi jiraataa magaala Laga Xaafoo ti.
Nama barate. Dhaabbata Inshuraansii keechatti qacaramee hojjeta. Torban har’aa galagala (tilmaaman halkan keessaa naannoo sa’aatii 2) bakka hojiisaa Finfinneerraa gara manaa galaa ture. Hiriyaa isaa wajjin nama lama ta’anii deemaa turan. Konkolaatan isaan ittiin deeman mana isaanii irraa fagootti waan naannofteef taaksii ‘Raayidii” waamanii eeggachaa turan. Oduma karaarratti taaksittii eeganuu Polisoonni lama dhufanii dubbisan (maqaa polisoota kana lamaanii ni beekna, ammaaf garuu asitti hin eerru). Ijoollen kunis waraqaa eenyummaa baasanii, dhalattoota fi jirattota magaalichaa akka ta’an, hojiirraa galaa akka jiran fi amma gara qa’ee ofii deemuf ‘Raayidii’ waamanii eeggachaa akka jiran itti himan.
Poolisoonni kunniin garuu waan ijoollen jettu dhagahuu hin barbaanne. Shugguxii gadi baafatanii doorsisaa uleedhan reebuu calqaban. Reebicha akkuma itti fufanitti ijoollee kana fuudhanii buufata poolisii xiqqoo (sub-station) dhihoo san jirtu geessan. Erga dallaa seenaniiyis reebicha ittuma fufan. Poolisoonni biraas itti dabalamanii reebuu calqaban. Ijoollen kuni akkuma duraanii irra deddeebi’uudhan dhalattoota naannoo sanii ta’uu isaanii, maqaa maatii waamun namoota beekaman ta’uu isaanii, hojjeettoota biiroo ta’uu isaanii himuu yaaluu fi waraqaa eenyumaa kan magaalaas kan mana hojiis agarsiisuu itti fufuun ala waan tokkollee hin goone.
Namni isaan dhagahu hin turre. Poolisoonni lamaan ilma namaa akka ilma bineensatti dhaanuu ittuma fufan. Kadhaan, watwaannaan, of-ibsuun homaa gatii hin arganne. Egaa kun kan ta’aa jiru bakka seerri itti kabajama jedhamee amanamu, dallaa buufata poolisii keessatti. Reebichi ittuma fufe. Biraanun hamma of-wallaalutti dhaanamee ijji isaa kan mirgaas jaamfame.
Kanaan hin dhaabbanne. Erga gurbaa ija jaamsanii booddee, dhiigni isaa akka bishaanii odoo irra yaa’uu fuudhanii gara buufata poolisii guddicha (main police station) maagaalichaa deeman. Akkasumatti takka lafarra harkisaa, takka uleedhan dhaanaa, takka daddarbaa buufaticha guddichaan gahan. Gaafa achi gahan, ajajaan poolisii magaalichaa ijji gurbaa akka jaamsame arge. ‘Nama ijji jaamee dhiigni akka bishaanii irra yaa’u isinirraa hin fuudhu jedhee gadi deebise’. Isaanis buufata keessaa baasanii, alatti gatanii deeman.
Hiriyaan isaa xiqqoo wayyoo qaba waan ta’eef, maatitti bilbilee hamma dhufanii fuudhatanitti, achumatti dhiigni isaa yaa’ee agartuun isaas dhangalaate. Firrii fi hiriyoonni walitti mirmatanii Hoospitaal Mililik gaafa gahan, ijji isaa hin jirtu. Battaluma doktaroonni ijichi yaalamuu akka hin dandeenye himanii ‘ija hafte miidhuu waan danda’uuf, amma xaragamuu qaba’ jedhanii murteessan. Amanuun nama dhibus, gurbaan bareedan kuni seer-maleessummaa seera kabajsiistotaatin qama hir’uu taasifamee jira.
Kan nama ajaa’ibu ammo haga ammaatti poolisoonni lamaan seeratti hin dhiyaanne. Wantoonni suukkanneesson akkanaa poolisiidhan raawwatamuun Laga Xaafo fi naannawa ishiitti kan calqabaa akka hin ta’in ni himama. Kana dura nama jaarsa biyyaa beekamaa tokko kaballadhan gurra duuchanii jiru. Warreen reebicha poolisiitin qaamni isaanii hir’ate hedduu akka ta’an dhageenyee jirra.
Wanti Biraanurra gahe kuni waan laayyee moti. Dhalattoonni Oromoo godinoota Naannawa Finfinnee jiran hundi akkanumatti adamsamu. Diinni diidaa dhufu isaan balleechuf hojjeta, warri akka poolisoota kanneenii mootummaa keessa taa’anii ummata mootummaatti kaasuf karoorfatanis kanuma hojjetu; mootummaan olaantummaa seeraa faarsaa oolus hojjeettoota isaa seera hin kabajsiisu. Ammaaf wanta hunda seerri ni qajeelacha jennee abdanna. Seenaa kana qoqqoodaa waliin gahaa. Dhimmi kuni haqa hin argatu taanan, hundi keenyaa kanumaaf teenya. Waan irra gahame hordofeen bareessa.
Tesfaye Shiferaw Sida
Oduu Injifannoo WBOn Zoonii Giddu Galeessaa irraa, hirreef gaachanni Uummata oromoo WBO’N zoonii giddugaleessa keessa socho’uu humna waraana faashistii xoophiyaa haleeluun nama 60 yoo irraa ajjeesu kanneen 70 ol ta’an immoo madeessuu beeksise! Godina shawaa lixaa Aanaa Meettaa Wal qixxee
Ganda Buufaa Caffeetti Gootichi Waraana. Bilisummaa oromoo Urjii Lolaan durfamu guyyaa kaleessaa 23, 2021 diina reeffa guyyaa
shan lafa bule kaafachuuf baayyina 300 oliin imalaa turte irratti
tarkaanfii fudhateen reeffa irratti reeffa dabaluun,
tooftaa lolaa harkaa gatee burjaajessuun weerartuu 60
yoo du’aan adabu, 70 ol immoo madoo guddaan adabuun
injifannoo guddaa irratti galmmeessee jira.
Lola kanaanis; meeshaaleen booji’aman
1, Kilaashii Akm 25 hidhannoo waliin.
2, Bireenii 1
3, Jorooroo bireenii abbaa 600.
4, Rasaasa Bireenii saanduqa tokko ija 700 waliin.
5, Boonbii 10 mooraa qabsoo bilisummaa oromoof galii godheera.
Injifannoon WBO waliin itti fufa!!
Via: Maammee Caffee
WARRA JIRAA DU’E” jettanii?
Basastoti Danbi Dolloo Universiti Kessa Sadan Warri Akka Baratotatti Qabxis Utuu Hin Qabatin Basasumaaf Mooraa Universiti Galttani Baratota Sabbonof Barsisota Sabbono Tahan Irratti Tika Motuma Walin Tahun Hojii Diinumaa irratti Namoti Bobbaatani Jirttan Sun Amma Arggamtani Jirttu
1ffa. #Ashiimi_Machii Heneche Irraa Kan Dhuftte
2ffaa. #Latera_Tasfaa Begii Irraa Kan Dhuftte 3ffaa. #Bakkashe_Kabadaa Naqamtte Irra Kan Dhuftte.
Suuraa Keessanif Maqaan Kessan Nu Bira Gahera. Gatii Kessan Fudhachuf Of Qopheessa Isinin Jenna Gantu fi Hattu Adabuuf Yoomu Dudduba Hin Deebinu.
Garee Sonsa Abbaa Torbee Magaalaa Danbi Dolloo Irraa
Maqaa warra wareegamee muraasa!